Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 38
Inona no atao hoe tsiro amin'ny sakafo?
Ny tsiro dia sangan'asan'ny vatana endrika ho an'ny fisoratana ny sanda sy ny toetra amin'ny ranon-javatra sy ny solida. Tsy misy tsiro ao amin'ny sakafo, mandra-pisian'ny rano amin'ny sakafo amin'ny lela. Raha vao nanantona ilay vatana, ny hamandoana, ny tsako, ny sakafo, ny taova ny tsirony, ny voa ny lela, dia nampita ny fahatsindron'ny sakafo. Raha tsy misy rano mampifandray ny sakafo sy ny hozatra amin'ny lela, dia tsy afaka mampita ny fahatsapana ny sakafo amin'ny vatana endrika ny nerve ary tsy afaka manatanteraka ny tsirony ny vatana.
Misy fifandraisana malemy eo amin'ny vatana manana toetra tsara ny tsirony, ny nerve sy ny vatana forme ary ny rano. Ny fifandraisana malemy dia fatorana izay mahatonga ny andaniny roa hidrogen ary ny ampahany iray amin'ny oksizenina ho lasa antsointsika hoe rano, izay tsy mitovy amin'ny toetran'ny hydrogen na oxygen na ny fitambaran'ny rano. Misy rano ao amin'ny s'y sakafo rehetra. Ny fatorana mampiray ny gony roa hamokatra rano dia fatorana tsy mitovy izay mampiray ny sakafo, ny nerveo amin'ny lela, ny rano ary ny vatana.
Isaky ny misy rano ara-batana dia miresaka momba ny sakafo amin'ny lela, ny singa maloto ao anaty rano dia misy ary miasa avy hatrany amin'ny vatana endrika, raha tsy mitotongana ny lalan'ny lela. Ny singa malemy ao anaty rano izay mampifandray ny sakafo amin'ny lela dia mitovy amin'ny rano sy amin'ny sakafo sy ny lela ary ny nerve. Io singa miraikitra io no tena izy, dia ny rano mago. Ny rano izay fantatsika dia ny fanehoana ivelany ivelany sy ny fisehoan'ny rano tsy fahita firy. Ity rano an-kolaka ity dia singa iray ahitana ny tena.
Ny tsiro dia fiasa ao amin'io vatana endrika io amin'ny alàlan'ny singa tsy mahasoa azy manondraka ireo essentiel na toetra tsara ao anaty sakafo. Ny tsiro dia fampiasa amin'ny vatana endrika, fa tsy izy io no fiasa. Ny tsiro dia iray amin'ireo fahatsapana. Ny vatana endrika dia ny fipetraky ny eritreritra rehetra. Ny vatana endrika dia manoratra ny fahatsapana rehetra. Ny olona dia mahatsapa amin'ny alàlan'ny vatana. Ny vatana endrika dia mifandray amin'ny iray hafa. Ny tanjon'ny sain'ny saina dia ny tokony handraisan'ny tsirairay anjara amin'ny soa ho an'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny, fa ny vatana dia mety ho fitaovana ilaina hampiasaina sy hampivoatra ny saina. Ny tanjon'ny tsirony dia amin'ny alàlan'ny endrika io dia mety hosoratanao ny fahatsapana vokarin'ny sakafo mba ahafahana manavaka azy ireo ary mandà ny sakafo toy ny tsy ilaina sy manimba, ary misafidy ireo ihany no mifanentana amin'ny fampiasana ny saina. amin'ny fananganana sy fikojakojana ny rafitra ara-batana sy ny vatana endrika.
Ny tsiro dia mitarika ny lehilahy sy ny biby sasany izay ilain'ny sakafo ilaina sy ilaina indrindra amin'ny vatana, raha miaina amin'ny fomba mahazatra sy voajanahary ny lehilahy sy ireo biby ireo. Saingy tsy ara-dalàna sy voajanahary ny olombelona ary tsy ny biby rehetra akory, noho ny fitaoman'ny olona nentin'izy ireo sy nampitondrainy azy.
Ny fahatsapana ny fofona dia tena mifandraika amin'ny sakafo sy ny tsirony noho ny eritreritra hafa satria ny fofona dia mila mifandray mivantana ary mifanaraka amin'ny zavatra ara-batana, ary ny sakafo dia vokarina amin'ny singa izay miditra amin'ny fandrafetana zavatra ara-batana.
Manandrana hanina ny vidiny ve ny sakafo raha sakafo ivelan'ny sakafo?
Manana izany. Ny sakafo matavy dia mamelona ny vatana vatana. Ny singa somary goavam-be, ny rano, voatonona fotsiny, dia famelomana ho vatana endrika ao anatin'ny vatana. Ny tsiron'ilay singa goavambe dia ny famelana ny ampahatelony izay ao anaty sy amin'ny alàlan'ny vatana. Amin'ny zanak'olombelona, ​​io zavatra fahatelo io dia tsy mbola endrika akory, na dia izany aza dia aseho amin'ny endrika manokana amina karazana biby. Ity fahatelo ity izay mahasoa ny olona avy amin'ny tsiron'ny sakafo dia ny faniriana. Tonga ao an-tsaina ny faniriana ary nampiasa azy ireo hanovozana ny fahafaham-po izay azon'ny fihetseham-po rehetra. Ny fahatsapana tsirairay dia manompo ny faniriana. Na izany aza, ny fahatsapana manokana izay mifanaraka amin'ny faniriana, ary ny faniriana ampiasaina dia mampifandray azy amin'ny fihetseham-po hafa. Ny faniriana dia mifandraika amin'ny alalàn'ny tsirony ary manintona ny fahafinaretana mety hitranga amin'ny sakafo amin'ny tsirony. Raha avela hanatanteraka ny fiasa tsirony ny vatana endrika nefa tsy mila mankatò ny fitakian'ny faniriana, dia misafidy sakafo tsotra fotsiny izy io raha ilaina amin'ny fitazonana ny endriny sy ny firafitra ara-batana. Saingy ny vatana endrika dia tsy avela hisafidy ireo sakafo ilaina. Ny faniriana dia mifehy ny vatana endrika ary mampiasa azy io mba hiaina ny fankasitrahana ireo fahatsapana izay tsy ho azony raha tsy misy ny vatana endrika. Ny tsiro izay tena mahafaly ny faniriana, ny faniriana dia mitaky amin'ny alàlan'ny vatana endrika, ary ny olona, ​​izay mino fa ny tenany ihany no faniriana, dia manome izay tsara indrindra azony omena azy amin'ny sakafo toy ny mangataka tsy ampoizina amin'ny alàlan'ny tsirony. Koa ny tsiro dia novolavolaina mba hanomezana fahafaham-po ny faniriana, ny famoronana biby tsy misaina, izay ao anatin'ny make-up ny olona. Amin'ny alàlan'ny famatsiana ny faniriana amin'ny alàlan'ny tsirony ny sakafo dia alaina ao amin'ny vatana izay manimba ny fikojakojana azy, ary rehefa mandeha ny fotoana dia mitebiteby ny aretina ara-dalàna ary ny valin'ny fahasalamana. Tsy tokony hofangaro amin'ny tsirony ny hetaheta. Ny hanoanana dia ny faniriana voajanahary ho an'ny biby ho an'ny fahafaham-po ny filany. Ny tsiro dia fomba iray ahafahan'ny biby iray misafidy ireo sakafo ilaina amin'ny fikarakarana azy. Izany biby izany dia any amin'ny tany masiaka, ary tsy lavitra ny fitarihan'ny olona. Ilay biby ao amin'ny olona, ​​matetika dia misafotofoto ny olona ary avy eo mamaritra ny tenany. Rehefa nandeha ny fotoana dia nambolena ny fahazoana sakafo. Ny faniriana na biby ao amin'ny olona dia nofahanin'ny tsirony moto amin'ny sakafo, ary ny biby dia manapotika ny vatana endrika ary miaro azy amin'ny fanatanterahana ny asany voajanahary amin'ny fikojakojana ny fahasalaman'ny vatana amin'ny maha-izy azy sy amin'ny fanompoana ny tahirin-tsakafo. fiainana izay azon'ny olona ampiasana amin'ny asany eo amin'izao tontolo izao.
Ny tsiro dia manana sanda ivelan'ny sakafo. Ny lanjany dia ny hamelona ny faniriana, fa ny hanome izany ihany no mahavelona azy, fa tsy ny hampitombo ny heriny mihoatra ny zavatra zakan'ny vatana endrika.